Utyelelo ngalunye kugqirha lukhokelela kuqala kwigumbi lokulinda okanye esibhedlele kwelona gumbi likhulu lokulinda. Nabo banesivumelwano kufuneka bahlale apho de babizwe. Kukho igumbi lokulinda kwiofisi yezilwanyana.
Kukwakho neendawo apho iindwendwe zilinda umntu ezinxibelelana naye, umzekelo kumashishini ezomthetho okanye kwiiofisi zikarhulumente. Amaxesha amaninzi kukho amaphephancwadi anokukunceda ulihambise ixesha. Kuhlala kukho umoya oxineneyo kwigumbi lokulinda. Abanye babantu abalindayo baphelelwa ngumonde okanye bazive ngathi abanye bayanikwa.
Ukuba uphupha igumbi lokulinda, unokoyika ukuqeshwa kwamazinyo. Okanye iphupha lilindele iziphumo zoviwo ezibalulekileyo. Ukufika ezantsi kwintsingiselo yephupha, ukuphupha kufuneka kucacise ukuba yintoni elinde kwigumbi lokulinda kwaye uziva njani.
Isimboli yamaphupha «igumbi lokulinda» ihlala ibhekisa kutoliko lwamaphupha kwiingxaki, ukupheliswa kwawo okuninzi. Umonde iyafuneka. Iphupha liyacelwa ukuba ligxile ekukhangeleni isisombululo, kunokuba silinde ukubona ukuba kwenzeka ntoni.
Ngokunokwenzeka iphupha likwanoluvo lokuba ukumelana nobunzima kuthatha ixesha elide kakhulu. Igumbi lokulinda ephupheni libonisa ukunganyamezeli okukhulayo ekuchazeni iphupha. Isimboli yephupha inokukukhumbuza ukuba umntu uthatha ixesha elininzi lokulala.
Ukongeza, uphawu lwephupha "igumbi lokulinda" likwangumqondiso we ukungaqiniseki noxinzelelo. Ixhala lamaphupha. Kwangelo xesha, ufuna ukucacelwa kwaye woyika inyani.
Nangona kunjalo, iphupha linokuchazwa phantsi kweempawu ezintle ekutolikeni iphupha. Ukulinda okuzolileyo kukwaveza ukomelela kwemithambo-luvo yokulala kwimeko enzima. Kuxhomekeka ekubeni imeko yangoku yobomi injani, igumbi lokulinda njengophawu lwephupha ekuchazeni iphupha linokuthetha ukuzaliseka kwangaphambi kwexesha Nqwenela okanye ndithembise ukulangazelela uthando.
Kwimeko yezengqondo, uphawu lwephupha "igumbi lokulinda" kutoliko lamaphupha luphawu lwexesha lokuma kokuhamba kobomi. Iimpikiswano ezinzulu okanye iingxaki zempilo zinokuqinisekisa ukuba ukulala kuyayeka okwethutyana kwaye kuya kufuneka ulinde okungakumbi ukuze kuqala ukukhula. Ekuchazeni amaphupha, uphawu lwephupha "igumbi lokulinda" livakalisa ukungabikho zingqondweni. Ukulindela yokuphupha.
Utyhila ukuba ngubani omlindileyo ephupheni: ugqirha, igqwetha okanye ummeli wegunya. Ngendlela yayo, ukuphupha kujonga abantu ukuba bakuqinisekise ngesigqibo esinzima okanye ukusixhasa ngengcebiso nangezenzo.
Ukuba iphupha liphelelwa ngumonde kwigumbi lokulinda, uphawu lwephupha lubonisa ukuba kubomi bokwenyani uhlala ufuna kakhulu kuwe nakwabanye. Kule meko, umonde ucebisa umntu oye waqonda ukuba lonke uphuhliso luthatha ixesha.
Ngokwenkcazo yengqondo yamaphupha, akhona Ukuxinezelekaukuba iphupha livakala kwigumbi lokulinda lephupha, kunye nolwazi malunga neempawu zakho zobunkokeli. Ukuba unokucinezelwa ngokulula lulindelo oluphezulu, ngokungazi ucinga ukuba awusilungelanga isikhundla sokuphatha.
Kwindawo egqithileyo, igumbi lokulinda luphawu ekutolikweni kwephupha ukuba iphupha kufuneka libe nomonde de kufike ixesha elifanelekileyo lokwenza.
Nangona kunjalo, isimboli yephupha inokuba sisicelo sokubamba elona thuba lilungileyo kwaye uthathe inyathelo lokuqala inkqubela phambili yengqondo ukufikelela.